Hiran State - News: Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ururka Shabaab ay u shaqeeyaan qaab qabiil oo aad cajiib u ah halka Hasan Daahir Aweys lagu sheegay inuu hogaamiyo dagaalyahanada ka dagaalama Hiiraan.
Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ururka Shabaab ay u shaqeeyaan qaab qabiil oo aad cajiib u ah halka Hasan Daahir Aweys lagu sheegay inuu hogaamiyo dagaalyahanada ka dagaalama Hiiraan.
Muqdisho: (HS)-Dowlada Maraykanka oo horey ugu qortay warbixin dheer TFGda kuna tilmaantay iney gabi ahaanba fashilantay kedib markii sida ay sheegeen ay dowladu fursado badan ka faa'ideysan waayeen ayaa sheegay in ururka Shabaab ay u shaqeeyaan qaab qabiil oo waliba dowlada mareykanka u sahashay in kooxdaasi la kala fur furo waxii ka danbeeyey dagaalkii weynaa oo ay galeen Ramadaankii ina dhaafay war bixintana sidan ayey u qorneyd.
Wixii ka dambeeyay dagaalkii waynaa ee bishii Ramadaanka dhexmaray Ciidamada TFGda iyo AMISOM oo isku dhinac ah iyo ururka Shabaab waxaa siyaasad ahaan iyo Milatari ahaan u kala jabay qaabkii uu ururka u shaqeynayey waxeyna durbadii isku shaandheyn ku sameeyeen hogaanka ururka.Warbixinta ayaa sheegtay in Shabaabka xiligaasi ay hogaanka sare u doorteen nin lagu magacaabo Ibraahim Xaaji Jaamac oo loo yaqaano (Afgaani) kaasi oo la sheegay in uu yahay nin tababar kusoo qaatay kana soo dagaalamay dalka Afghanistan iyo gobolka Kashmiir ka hor inta uusan dib ugu soo laaban gudaha dalka Soomaaliya, inkasta oo aan warbixinta lagu cadeyn waqtiga uu rasmiyan dalka dib ugu soo laabtay.
Warbixintu waxa ay sheegtay in kooxda Shabaab ay leeyihiin Hogaan sare iyo kuwo hoose oo Maamula gobolada iyo Tuulooyinka ay ka taliyaan hase ahaatee waxa ay u dhisan yihiin qaab qabiil sida lagu xusay Warbixintaani kasoo baxday Golaha Atlantic-ada ee dalka Maraykanka oo horey warbixin sidaan oo kale ah uga soo saaray TFGda.
Maraykanka ayaa Warbixinta ku sheegay in Axmed Cabdi Godane oo la yaqaano Muqtaar Abuu Subeyr in uu si gaar ah ugu qaabilsan yahay ururka howlgalada ka dhanka ah maamulka Somaliland halka Fu'aad Shanqoolena Puntland loo xilsaaray maadamaama ay degaanadaasi ka soo jeedaan.
Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa isna la tilmaamay in uu ururka Shabaaab Mas’uuul uga yahay gobolada Bay iyo Bakool ee Koofurta Somaliya halka Xasan C/laahi Xirse Xasan Turki la sheegay in uu isna qaabilsan yahay gobolo ay ka mid yahiin Jubada Hoose kaasi oo sida la sheegay la rumaysan yahay in uu Madax ka yahay Ururkii Mucaskarka Raaskambooni oo hada qeyb ka ah Shabaab.
Sheekh Cali Max’ud Raage (Cali dheere) ayaa isna waxaa uu hogaamiyaa abaabulka Milatari ee ay ururka Shabaab ugu soo horjeedaan Ciidamada AMISOM iyo kuwa TFGda ee ku sugan Magaalada Muqdisho, iyadoo sida la sheegay gacan uusiin jiray Hogaamiyihii Al-qaacidada Bariga Afrika Fazuul Cabdalla oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Comoros kaasi oo ay Ciidamo dacad u ah TFGda ku dileen bar Kontorol oo ku taala duleedka Magaalada Muqdisho sida warbixinta lagu xusay.
Sheekh Xasan Daahir Aways oo ah Hoggaamiyihii Ururkii burburay ee Xisbul Islaam oo sida warbixinta lagu sheegay lagu qasbay in uu ku biiro ururka Shabaab uu hogaamiyo howlgalada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo warabixinta lagu sheegay in uu halkaasi maamulayey tan iyo waxii ka danbeeyey bur burkii xilbigiisa, waxaana warbixinta lagu sheegay iney walito doonayaan iney sii wadaan dagaalka ururka Shabaab.
Sida muuqata warbixintan ayaa waxaa dowlada Mareykanka siweyn ugu saaciday sirdoonka wadanka Somaliya ka jooga oo xafiisyo waaweyn ku leh Mogdisho iyo meelo cayiman oo dalka ka mid ah.
· admin on July 22 2011 14:21:02 · 0 Comments · 1933 Reads ·
14,613,631 unique visits